Ny 6 safidy tsara indrindra amin'ny WhatsApp maimaim-poana ary amin'ny fiainana manokana | Androidsis
Francisco Ruiz | | Fampiharana Android, WhatsApp
Androany izahay te-hitondra anao ho lisitra ny tsara indrindra fampiharana hisolo ny fampiharana WhatsApp malaza mba hifandraisana amin'ny resaka chat na antso an-tsary amin'ireo olona ifandraisantsika.
Amin'ny fitsipika ato amin'ity lahatsoratra ity dia tianay ny hanolotra anao ny fomba tsara indrindra hanoloana azy ireo WhatsApp. Tsy ho ela dia hanome anao fanaparitahana lalina ireo fangatahana resahina eto izahay.
5 Wire: Fiarovana ho mariky ny maha-izy anao
La fanelingelenana nananan'ny Telegram tamin'ny faritra maro Tokony horaisina izany, miaraka amina mpampiasa vaovao 70.000 isan'andro any Amerika Latina sy any Espana misy mpampiasa 200.000 XNUMX isan'andro noho ny toetra mampiavaka azy.
Fampiharana loharano misokatra, mifantoka amin'ny fiainana manokana miaraka amin'ny efitrano manokana ho an'ity tanjona ity, maimaimpoana tanteraka ary izany dia serivisy mifototra amin'ny cloud multiplatform no toetra manandanja indrindra, ankoatry ny fandefasana rakitra 1GB na efitrano misy mpampiasa 200.
Fampiharana iray izay miasa toy izany koa amin'ny rindranasan'ny Facebook, fa miaraka amin'ny sasany safidy manokana momba ny fiainana manokana, vao havaozina ihany koa, toy ny hafatra manimba tena.
Izy io dia rindranasa azontsika ampiasaina amin'ny finday avo lenta ihany koa, saingy misy kinova ho an'ny solosaina ihany koa. Ka izany dia safidy tena ahazoana aina sy mahomby handinihana izany. Mety ny fampiharana fandefasan-kafatra tsara indrindra fa eny an-tsena isika izao. Maimaimpoana ny misintona, tsy misy doka ary tsy mila mandoa vola izahay.
Telegram hatramin'ny voalohany dia efa fampiharana multi-sehatra, noho izany dia afaka manaraka tsara ny resadresaka sy vondrona misy antsika koa izahay avy amin'ny tranokala Telegram. Misy ireo mitazona izany Telegram dia fivoaran'ny WhatsApp. Telegram dia manome ny mpampiasa famindrana rakitra misy endrika sy fahaiza-manao lehibe kokoa, ho fanampin'ny manolotra fiasa bebe kokoa sy tsiambaratelo lehibe kokoa noho WhatsApp.
Izany dia ny fampiharana fandefasana hafatra avy amin'ny Facebook. Satria "nisaraka" tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny fampiharana Facebook ho fampiharana mahaleo tena iray hafa, dia nisy fampidinana maherin'ny iray amby efapolo tapitrisa. Ny marina dia manolotra zavatra tena mitovy amin'ny Telegram i Messenger, saingy tena tsara ny asany.
Misongadina ny kalitao sy ny fahamendrehana azony amin'ny antso an-tsary. Na dia fantatsika aza fa miankina amin'ny kalitaon'ny fambara amin'ny Internet ny ankamaroan'ny fiasan'izy io, na dia ny misintona 4G aza dia miaro tena amin'ny fomba misy solvent. Mifanohitra amin'ny eritreritry ny maro tsy vitan'ny hoe miasa miaraka amin'ireo fifandraisana amin'ny Facebook-tsika fotsiny, na dia eo am-piandohany aza raha toa ka izany.
Miaraka amin'ny Messenger azonao atao ny mandefa hafatra amin'ireo contact ao amin'ny bokin'ny telefaoninao. Ampidiro ny nomeraon-telefaona raha mila lisitra fifandraisana vaovao hifandraisana amin'ny Messenger. Toy ny hafa, mamela ihany koa ny famindrana sary sy fisie. Azonao atao koa ny manoratra hafatra am-peo
Te hitombo ny goavambe Aziatika mandefa hafatra eo noho eo ary nandray ny fahefana voalohany. Amin'izao fotoana izao dia misy vondron'olona mpampiasa ny WeChat, ary ny orinasa ao ambadiky ny App Tena liana amin'ny fampitomboana bebe kokoa izany amin'ny fampielezan-kevitra amin'ny doka sy "artista vahiny".
Inona no atolotray? Ho fanampin'izay fantatsika rehetra WhatsApp, WeChat manolotra ny fahafahan'ny manao antso an-tsary HD maimaim-poana tanteraka ary manana kinova an-tranonkala mifanaraka amin'ny mpitety rehetra. Ny fotony goavan'ny mpampiasa meksikana dia mety ho tombony amin'ny tsenan'ny fifaninanana, satria azo inoana fa manana izany koa ny namanao WeChat.
Ny iray amin'ireo safidy mahazatra indrindra amin'ny WhatsApp dia tsy tokony ho hita tao amin'ilay lisitra, izay amin'ity tranga ity dia avy any Chine. Ka ireo mpampiasa telefaona Huawei dia afaka mahazo miditra aminy foana, na Android na ARK Os no ampiasainy amin'ny telefaona. Io no fampiharana fandefasan-kafatra malaza indrindra any Sina amin'ity lafiny ity, noho izany dia naseho azy ho safidy tsara hodinihina, na dia efa voamarinay aza fa manana mpampiasa maro avy any Mexico koa izy.
Izy io dia mamela ny sakaiza tsy miankina, ny vondrona, ny antso, ny antso an-tsary, ary koa ny lahasa fanampiny fanampiny.
Noho io antony io, WeChat dia miasa ho toy ny fampiharana fandefasan-kafatra sy tambajotra sosialy saika, na dia manambatra singa hafa aza. Noho izany, aseho ho safidy tsara ho an'ny WhatsApp izy io. Maimaimpoana ny fampidinana azy, na dia misy fividianana (tsy voatery) ao anatiny.
Developer: WeChat International Pte Ltd.
Rehefa natomboka i Line dia be ny zavatra nandrasana, satria noheverina fa hifaninana amin'ny WhatsApp aza, saingy satria nanampy endrika vaovao izy ireo, amin'ny farany dia misy ny fampiharana izay mavesatra be. Mety izany no iray amin'ireo antony tsy fananana izany fahombiazana lehibe niandry azy izany.
Na izany na tsy izany dia fampiharana izay manatanteraka tsara ny iraka ampanaovina azy sy izany any amin'ny faritra sasany dia mandray tsara izy io ary mety ho safidy tsara amin'ny WhatsApp izy io. Ireo sticker izay amidiny ao amin'ny fivarotany manokana dia iray amin'ireo antsipiriany mampiavaka azy, ary izay manitatra ny asany mihoatra ny andrasana amin'ny serivisy fandefasan-kafatra an-tserasera.
Ny tsipika dia iray amin'ireo safidy hafa fantatry ny WhatsApp avy amin'ny tsena, efa an-tsena efa an-taona vitsivitsy izao Amin'ity rindranasa ity dia manana ny ankamaroan'ny fiasa hitantsika amin'ity ampahan'ny tsena ity izahay. Afaka manao resaka tsy miankina na vondrona isika, ankoatry ny fiantsoana horonantsary. Raha misy ny antso an-tariby ataon'ny vondrona dia avelany hanana olona 200 miaraka amin'ny iray ora izy ireo. Fiasa izay ampiasain'ny mpampiasa vitsivitsy amin'ity lafiny ity.
Amin'izany fotoana izany, Manana karazana Timeline izy io, izay miasa amin'ny tamba-jotra sosialy. Noho izany, mety ho safidy tsara izy io raha tena voasakana amin'ny finday avo lenta Huawei ny WhatsApp, satria manambatra ny serivisy roa amin'ny fomba iray amin'ny rindrambaiko tokana. Ny endriny dia mora ampiasaina, noho izany dia tsy hanana olana ianao. Maimaimpoana ny fampidinana azy, na dia misy fividianana sy dokam-barotra ao anatiny aza.
Any Azia dia mitazona ny tanjaky ny fanekena mafy any Japon.
LINE: Antsoy sy SMS
Wire: Fiarovana ho mariky ny maha-izy anao
Ity fampiharana faharoa ity dia mety toa ny maro aminareo, satria mahazo eo amin'ny tsena. Izy io dia aseho ho safidy tsara hiarovana ny tsiambaratelon'ny mpampiasa, amin'ny fomba tsara lavitra kokoa noho ny WhatsApp amin'izao fotoana izao. Izy io dia noforonin'ny mpiara-manorina ny Skype, Janus Friis. Orinasa Soisa izy io, ka raha ny tokony ho izy dia tsy hisy ny fanakanana an'i Huawei, raha toa ka tsy afaka mampiasa WhatsApp amin'ny ho avy izy ireo amin'ny telefaona vaovao.
Izy io dia fampiharana izay manana endrika mahaliana, izay azo antoka fa tian'ireo mpampiasa maro. Mila mailaka na nomeraon-telefaona ianao hahafahana mampiasa azy, na dia tsy zaraina amin'ny mpampiasa hafa aza izany fampahalalana izany. Hatramin'ny fampiharana dia mifampiresaka amin'ny fampiasana alias. Toy ny mitranga ao Telegram, afaka mandefa hafatra manimba tena isika. Maimaimpoana ny fampidinana azy ary tsy misy doka na fividianana ao anatiny.
Wire • Hafatra azo antoka
Skype dia iray amin'ireo rindrambaiko fandefasan-kafatra an'i Microsoft, ary niavaka noho izany foana izy mora ny manao antso an-tsary, ary koa ny mety fandefasana hafatra amin'ny mpampiasa hafa, na dia ny famoronana vondrona (zavatra azontsika atao koa amin'ny WhatsApp).
Ahoana no mety hitranga raha tsy izany dia mety ho izy ireo koa mandefasa emotikon na karazana rakitra (horonan-tsary, sary, lahatsoratra ...). Izy io dia azo faritana, hananantsika izay ilaina rehetra hifandraisana tsy misy fanasarotana be amin'ny mpampiasa.
Ny tombony azon'ny Skype dia ny mpampiasa maro nametraka azy io na namorona mpampiasa tamin'ny fotoana iray, ka azo inoana fa hahita olona marobe ao amin'ny lisitry ny fifandraisana amin'ity fampiharana hafatra sy antso video ity ianao.
Na izany aza, vokatry ny fanatsarana tsy tapaka naseho tamina fampiharana fandefasan-kafatra hafa dia nihena ny lazany sy ny fampiasana azy tato ho ato. Na dia izany aza, dia mbola safidy tsara hafa ampiasain'ny mpampiasa an-tapitrisany, hatramin'ny manana izay ilainao amin'ny fifandraisana lavitra mahomby.
Na dia misy vitsivitsy aza, Mino izahay fa Telegram sy Facebook Messenger no vahaolana matanjaka indrindra amin'ny WhatsApp.
Ny marina dia mitovy daholo ny tolotra omen'izy telo antsika. Ka avy eo dia resaka tsiro ihany.
Mandritra izany fotoana izany dia mitombo hatrany ny Telegram ary misy ireo milaza fa tsara kokoa noho ny mpifaninana aminy lehibe io. Saingy mbola tsy afaka mifaninana amin'ny teny mitovy izy ireo. Tianao ve ny iray amin'ireo fampiharana roa ireo noho ny be mpampiasa indrindra? Mampiasa iray hafa ve ianao?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » WhatsApp » Ireo safidy 6 tsara indrindra ho an'ny WhatsApp maimaim-poana sy amin'ny tsiambaratelo bebe kokoa
* Google + *, Azo ampiasaina miaraka amin'ny takelaka, finday ary PC izy io ary misy kaonferansa video hatramin'ny olona 10. Mamela anao hiresaka amin'ny namanao, hanao vondrona, handefa sy handray sary sy horonan-tsary, handamina hetsika, hanaraka mpampiasa na antity, hanatevin-daharana ny vondrom-piarahamonina, hitahiry ny sarinao (hatramin'ny 2048 × 2048 teboka) sy horonan-tsary amin'ny fomba tsy voafetra, miaraka amin'ny ny fahafaha-manao azy amin'ny finday eo noho eo sy mandeha ho azy, ary avy eo zarao amin'ireo olona tadiavinao. Lalao maromaro no azo lalaovina amin'ny PC.
Valiny amin'i ALF
Sabas Escobar Zayas dia hoy izy:
ALF: Tena marina! Tena tsy manam-pahaizana momba ireo olana ireo aho, mpampiasa mahazatra fotsiny, saingy efa nanandrana ireo safidy rehetra ireo aho, ny sasany tsy ampy zavatra, ny hafa kosa miantra ary ny zava-misy dia tsy tiako na 100% no ilaina, na izany aza As in "raha" efa nampiasa ny Google Talk, hangout ary fitaovana google plus hafa foana aho nefa tsy tsapako akory izany mba hifandraisana amin'ireo fianakaviako sy namako hafa monina lavitra ny misy ahy.
Nampahatsiahy ahy ny rahavavaviko rehefa nangataka taminy aho (tamin'ny alàlan'ny Google Talk) hametraka WhatsApp, Viber, Wechat, Skype, Line ary tsy haiko intsony hoe ahoana no ahafahanay mitsapa hoe iza no mety kokoa aminay roa, iza no afaka mampiasa tsara kokoa isika amin'ny telefaona finday, ny takelaka ary ny PC, ary hoy izy tamiko: «Ohatrinona no tadiavinao, tsy mbola mifampiresaka ve isika? Mandrosoa, tsindrio ny horonan-tsary hahafahana mifampiresaka tsara kokoa, mifankahita ary mijanona tsy manoratra ».
Ary noho izany dia efa esoriko ireo rindranasa rehetra ireo, tsy hoe tsy tsara akory izy ireo, fa satria izay notadiaviko, inona no tokony hifandraisako amin'ireo olona liana amiko, satria efa nanana an'io aho, io ihany no tsy nahatsapa fa nanandrana ny lamaody. fiarahabana
Mamaly an'i Sabas Escobar Zayas
ChatOn ho ahy no tsara indrindra:
1- Namboarin'i Samsung sy notehiriziny
2- Maimaimpoana 100%, tsy ampandoavin'izy ireo akory na dia sticker 1 aza (sticker cobra tsipika)
3- multiplatforms (android sy iphone fotsiny ny spotbros ohatra)
4-client client (ny client dia mila apetraka amin'ny birao)
5-mora ampiasaina ary haingana.
6- afaka mandefa hafatra am-peo voarakitra ianao
6- ho fanampiny dia misy sticker sticker mahafatifaty.
- tsy manana antso video
- Tsy dia miparitaka loatra izy io, tokony hampahafantarinao ...
Bruno Rios dia hoy izy:
Azafady wechat !!!
Valiny tamin'i Bruno Ríos
Efa nilaza taminay izahay fa lisitra manondro izany ary maro ny rindranasa tsy hita izay mety hisolo WhatsApp tanteraka
Tsy misy fisalasalana fa aleoko Spotbros, satria ho ahy dia ilaina ny filaminana. Manana kinova birao sy kinova WindowsPhone nomanina ry zareo.
Ary eo amboniny dia Espaniola.
Fampiharana tena tsara tsy misy fisalasalana, na dia be aza ny mpampiasa mitaraina momba ny interface sarotra.
Parus dia hoy izy:
Mazava ho azy fa tsy izany ny Line, mihinana 50% ny bateria izy raha tsy mampiasa azy, mampiasa azy 70% ary aleoko mandeha mandritra ny 2 andro ny findaiko fa tsy andoavana isaky ny 7 ora
Mamaly an'i Parus